जीवनजलले पायो ७ वर्षपछि पुनर्जीवन | NHEICC
जीवनजलले पायो ७ वर्षपछि पुनर्जीवन
झाडापखलाले कसैलाई सतायो भने अधिकांशले सुझाउने औषधि हो, ‘जीवनजल’। देशका दुर्गम ग्रामीण भेगमा झाडापखलाको प्रकोप देखियो भने पनि अधिकांशले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ‘जीवनजल’ पनि पुर्‍याउन नसक्ने भन्दै आक्रोश पोख्छन्।
तपाईं हामीमध्ये अधिकांशले ‘जीवनजल’ खाएका पनि छौंँ। तर, पछिल्लो सात वर्षयता नेपालमा ‘जीवनजल’को एउटा पनि प्याकेट उत्पादन भएका छैनन्। बजार तथा स्वास्थ्य संस्थामा पनि ‘जीवनजल’ भेटिन छाडेको सातै वर्ष भइसकेको छ।
त्यसो भए सात वर्षयता झाडापखलाको औषधिका रुपमा खाइरहेको औषधि के हो त? ती औषधि पनि ‘जीवनजल’ जस्तै प्रकृतिका औषधि हुन्। तर, तिनीहरुको नाम भने फरक–फरक छ। सात वर्षदेखि फरक–फरक नामका औषधि बजारमा आइरहँदा पनि नेपालीहरुको जनजिब्रोमा झुन्डिरहने ‘जीवनजल’ चाँहि नेपाल औषधि लिमिटेडबाट उत्पादन हुने झाडापखलाको औषधिको नाम हो।
नेपालमा झाडापखलाको औषधि भन्ने बित्तिकै अन्य जुनसुकै कम्पनीका औषधि आए पनि ‘जीवनजल’ नै भनेर नाम कमाएको लिमिटेडको उत्पादन ‘जीवनजल’ भने २०६६ सालदेखि बन्द थियो। अब भने जीवनजलको उत्पादन पुनः सुरु भएको छ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको लिमिटेडले आइतबारबाट जीवनजलको उत्पादन सुरु गरेको हो।
उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले आइतबार औपचारिक रुपमा जीवनजलको उत्पादन सुरु गरे। लिमिटेडबाट अब दैनिक १० हजार पाउच (प्याकेट) जीवनजल उत्पादन हुनेछ। लिमिटेडबाट उत्पादित जीवनजलको प्याकेटको तौल २३ दशमलव ५ ग्रामको हुनेछ। उक्त जीवनजल बजारमा प्रति प्याकेट ९ रुपैयाँमा बिक्री हुने जनाइएको छ। जीवनजलको नयाँ उत्पादन हाल बजारमा रहेका जीवनजल भनेर चिनिने अन्य औषधिभन्दा सस्तो र गुणस्तरीय रहेको लिमिटेडले जनाएको छ।
२०२९ सालमा स्थापना भएको औषधि लिमिटेडबाट विगतमा एक सय २० प्रकारका औषधि उत्पादन हुन्थे। तर, विश्व स्वास्थ्य संगठनको जिएमपी मापदण्ड पूरा नभएका कारण ०६६ सालदेखि औषधिको उत्पादन बन्द थियो। अहिले लिमिटेडले उक्त मापदण्ड पूरा गरी उत्पादन अगाडि बढाएको हो। लिमिटेडले तीन महिनाअघि परीक्षणका रुपमा सिटामोल समेत उत्पादन गरेको थियो।
जीवनजल उत्पादनको उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री जोसीले लिमिटेडबाट जीवनजल, सिटामोलसहित एक सय २० प्रकारकै औषधि उत्पादन हुने बताए। उनले विभिन्न चरणमा गरि एक सय २० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न लिमिटेडलाई निर्देशनसमेत दिए।
‘लिमिटेडबाट उत्पादन हुने हरेक औषधि गुणस्तरीय हुनेछ,’ मन्त्री जोशीले भने, ‘यी औषधि गुणस्तर हुनुका साथै सस्तो पनि हुनेछन्।’ उनले लिमिटेडबाट उत्पादित औषधि स्वास्थ्य मन्त्रालयको निःशुल्क कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद गरी देशभरमा पुर्‍याउने तयारी भएको बताए।
कार्यक्रममा लिमिटेडका महाप्रबन्धक डा. रोवशकुसम सुवेदीले समयअनुसार लिमिटेडलाई विस्तार गर्दै नयाँ–नयाँ उत्पादनमा जोड दिने बताएका थिए।
source : swasthykhabar
This entry was posted in News and tagged diarrhea, industry, jibanjal, medicine, nepal on May 8, 2017 by nheicc.
← किशोर-किशोरीहरुका प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी जिज्ञासा पुस्तिका स्वास्थ्य मन्त्री थापाले गराए कान्ति अस्पतालमा छोरीको उपचार, रियाक्टिभ आर्थाइटिस देखियो →